Dambudziko rekuvandudza watchOS 6.2? Aya ndiwo marongero avanogadzirisa | IPhone nhau
Dambudziko rekuvandudza watchOS 6.2? Aya ndiwo marongero avanogadziriswa
watchOS 6.2 yakaburitswa kare kare, zvisinei, vashandisi vazhinji vari kusangana nezvinetso zvakakomba pavanogadziridza chishandiso nechimwe chikonzero icho Apple isati yataura asi izvo zviri kukonzera kushushikana kwakanyanya, kunyanya kune avo vashandisi veApple Watch vanoratidza shanduro dzekare dzechigadzirwa. . Usatombo kunetseka, sekugara mu iPhone News tinokuunzira matipi edu madiki ekubvisa chestnuts mumoto. Kana iwe uchinetseka kuvandudza yako Apple Watch kuti utariseOS 6.2 kana gare gare, heino maitiro ekugadzirisa izvi. Gara nesu uye uone kuti zviri nyore sei kuzvigadzirisa.
Nyowani yepamutemo vhezheni yeiwatchOS 6.2.1 yakaburitswa
Chaizvoizvo takawana dambudziko iri mumidziyo pamberi peApple Watch Series 4, ndiko kuti, avo vakura zvishoma uye vari kusangana nezvimhingaidzo zvakawanda neshanduro dzichangoburwa dzeyekushandisa. Iva zvazvingaite, patinoita kuyedza kuisa iyo yekuvandudza kana kunyangwe patinayo mune otomatiki yekuvandudza fomati, Isu tinoona kuti ziviso pane yedu iPhone inotitaurira kuti kukanganisa kwakaitika panguva yekumisikidza uye kuti tinoedza zvakare. Ivo havatipe isu rumwe ruzivo nezve izvo zviri kuitika, asi kana iwe ukaedza kumanikidza kumanikidza iyo yekuzoona iwe unozoona kuti inoramba ichikanda iyo imwechete kukanganisa kakawanda.
Chinhu chekutanga chatichaita kuita kubva ku iPhone kudzima otomatiki gadziriso kana isu tave nekumisikidza uye kutangazve iyo Apple Watch. Iye zvino tinodzokera kunotsvaga iyo yekuvandudza uye mune ziviso simbisa kuti iwe unoda "kuisa iyo yekuvandudza husiku". Mune ino kesi, siya iyo Apple Watch yakabhadharwa husiku uye iwe uchaona kuti iyo otomatiki kumisikidza ichaitika sei. Sezvauri kuona, Nzira yakapusa yekugadzirisa iko kukanganisa ndeyekugadzirisa iyo husiku uye kuimisazve muchiitiko chekuti tanga takaigadzira, kana kuimisikidza mune kesi yatisina kuigadzira. Hatizive kuti nei iko kukanganisa kuchikandwa kana uchiedza kumanikidza iyo yekuvandudza nemawoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dambudziko rekuvandudza watchOS 6.2? Aya ndiwo marongero avanogadziriswa
Imwe yefekitori yeScams skrini muVietnam inoparadzanisa vashandi vayo
Hutano hwekuUK NHS iri kutogadzirira yayo yekutarisa app zvichibva pachibvumirano cheApple-Google